Somalia:Warka Dalka – TFG | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > TFG Somalia, WARARKA	> Somalia:Warka Dalka – TFG
Somalia:Warka Dalka – TFG
Tuesday, August 16, 2011 Laaska News
Dilal ka dhacay magaalada Boosaaso
Madaxweyne Shariif iyo wafdigiisa oo caawa dalka dib ugu soo laabtay
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Shiikh Shariif Shiikh Axmed iyo wafdigiisa ayaa goor dhow dalka dib uugu soolaabtay.
Madaxweyne Shiikh Shariif sheikh Axmed ayaa dalka Burundi kulan kula soo qaatay dhiggiisa dalkaasi, kaasi oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya iyo xiriirka laba dalka ka hor inta uusan dalka dib ugu soo laabanin.
Wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa R/wasaare ku xiggeennada kala ah wasiirka Ganacsiga, wasiirka arrimaha dibadda iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Dhiggiisa dalka Burundi.
Madaxweynaha Soomaaliya mudane Sh Shariif Sh Axmed ayaa magaalada Bujambuura ee caasimadad dalka Burundi kula kulmay dhiggiisa dalka Burundi
Kulanka labada madaxweyne ayaa diiradda lagu saaray arrimo fara badan oo ku saabsan xaaladda dalka gaar ahaan dhinacyada siyaasadda , Ammaanka iyo gargaarka baniaadaninmada.
Madaxweynaha Soomaaliya mudane Sh Shariif ShAxmed ayaa sidoo kale kala hadlay Madaxweynaha burundi sidii loo adkeyn lahaa xiriirka iskaashi ee u dhexeeya labada dowladdood.
Waxa uuna safarka uu madaxweynuhu ku tagay dalka Burundi kusoo dhmaaday si guul ah.
R/wasaare C/weli oo sheegay in Dowladdu xaqiijin doonto ammaanka Dalka
R/wasaaraha Soomaaliya Dr. C/weli Maxamed Cali “Gaas” ayaa sheegay in Dowladdu xaqiijin doonto ammaanka dalka isla markaana ay furi doonnto suuqyada iyo waddooyinka ku xirmay dagaallada Muqdisho isagoo u digay shaqsiyaadka carqaladeynaya mucaawinada gargaarka ah.
Dr/ C/weli R/wasaaraha Soomaaliya oo wareeysi qaas ah xafiiskiisa ku siiyay Telefeshilinka iyo Idaacada Radio Muqdisho ayaa sheegay in Dowladdu ay ahmiyadda koowaad siineeyso sugidda amaanka dalka gaar ahaan meelaha dhawaan laga saaray Shabaab, sidaasi darteedna ayuu yiri meelaha ay ciidamadu ka saareen shabaab aysan habdooneyn in shacabku ku degdegaan tan iyo inta laga sugayo amaanka goobahaasi.
R/wasaaraha ayaa intaa ku daray in dowladda ay u qorsheeysan tahay dib u furida suuqyada iyo waddooyinka ku xirmay dagaallada ka soconaya Muqdisho ayna shacabka u fasaxi doonaan kadib marka la xaqiijiyo amaanka suuqyada, xaafadaha iyo waddooyinka.
Sidoo kale R/wasaare C/weli waxa uu digniin culus u jeediyay shaqsiyaadka carqaladeynaya gargaarka loogu talagalay dadka tabaableysan, wuxuuna hoosta ka xariiqay in dowladdu aysan u dulqaadan doonin arintaasi.
Hadalka R/wasaaraha ayaa imaanaya xilli ciidamada Dowladdu ay shabaab ka saareen inta badan magaalada Muqdisho iyagoo hataanna ku howlan sugidda amniga xaafadahaasi.
R/wasaare C/weli oo qaabilay wufuud ka kala socotay Iran iyo Aljeriya
R/wasaaraha Soomaaliya Dr. C/weli Maxamed Cali ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafuud ka kala socotay wadamada Iran iyo Aljeeriya.
Wufuudaasi ka kala socotay wadamada Iran iyo Aljeriya oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa R/wasaare Dr. C/weli waxa ay kala hadleen sida loo gargari karo dadka barakacayaasha ah ee ku dhibaateysan gudaha dalka.
Wafdigan ayaa sheegay in wadamadoodu ay gacan ka geeysan doonaan howlaha lagu gargaarayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan gudaha dalka.
Wadamadani ayaa qeyb ka noqon doona wadamo hore gar gaar u soo gaarsiiyay Muqdisho kuwaas oo ay ka mid yihiin Turki, Kuweyt, iyo Imaaraadka.
Somalia:R/wasaaraha Soomaaliya Dr. C/weli Maxamed Cali ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafuud ka kala socotay wadamada Iran iyo Aljeeriya – Daawo sawirrada
Wasiirka arimaha gudaha iyo amniga Qaranka oo kormeeray xaruntii hore ee wasaaraddaasi
Wasiirka arimaha gudaha iyo amniga Qaranka ayaa maanta kormeer ku tagay xaruntii wasaaradda arimaha gudaha iyo xaruntii maamulka G/Banaadir ee ‘Fisho Governo’.
kor meerkan uu wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka maanta ku tagay xarunta wasaaraddii hore ee arimaha gudaha ayaa waxaa ku wehliyay taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha taliye ku xigeenka ciidanka boliska Agaasimaha guud ee wasaaradda arimaha gudaha iyo Amniga Qaranka iyo xubno ka tirsan wasaaraddaasi.
Wasiirka wasaaradda arimaha gudaha iyo Amniga Qaranka Mudane Cabdi samad Sheekh Maxamuud oo war baahinta Qaranka kula hadlay xaruntii hore ee Wasaaradda arimaha gudaha ayaa sheegay in wasaaradda uu hadda ka muuqdo burbur lixaad leh ayna u baahantahay dib u dayacdir xoog lehm, waxa uuna xusay Wasiirku in ay adagtahay in waqtigan ay wasaaraddu ku laabaato, isagoo rajeeyay in dhawaan dayactir lagu sameeyndoono xarunta wasaaradda arimaha gudaha iyo amniga Qaranka.
sidoo kale wasiirka ayaa koormeer ku tagay xaruntii maamulka Gobolka Banaadir ee ‘Fisho Governo’ waxa uuna sheegay in ay ka mid tahay meelaha sida ugu dhaqsiyaha badan dowladu u dayactiri doonto xaruntaasi oo ay xilligaan ku nool yihiin dad barakacayaal ah, waxa uuna xusay in dadka barakacayaasha ah ee halkaasi ku nool la geeyn doono xereeyin loogu tala galay, isagoo sheegay Wasiirka in uu socdo mashruuc ballaaran oo lagu banneeynayo meelaha ay dowladu ladahay.
Maalintii shalay ayeey aheeyd markii madaxweeynaha Soomaaliya uu shacabka uga digay in ay deegaan ka dhigtaan dhulka ay dow ladu leedahay oo ah hanti Qaran.
Magaalada Boosaaso ayaa xalay waxaa ka dhacay dilal kala duwan kuwaasi oo ay geysteen kooxo afafka soo duubtay.
Falalkan dilalka ah ee xalay ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari gudaheeda iyo Dibadeeda ayaa waxaa geystay kooxo Bastoolado ku hubeysan islamarkaana afafka soo duubtay.
Dilka koobaad ayaa waxaa bartamaha magaalada Boosaaso loogu geystay Nabaddoon Cabdiwahaab Sheekh Maxamed Allaale, oo sidoo kale ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Golis waxaa la dilay xili uu ka soo baxay masjid uu ku tukaday Salaadii Taraawiixda ayadoo albaabka hore ee Masjidka ay ku toogteen kooxo Bastoolado ku hubeysnaa.
Dilka labaad ayaa sida goob joogayaal ay sheegeen waxaa uu ka dhacay deegaanka Mareero oo qiyaas ahaan 30-km dhanka bari kaga beegan magaalada Boosaaso halkaasoo koox hubeysan ay ku toogteen ruux rayid ah oo ilaa hada aan la ogaan sababta ay u bartilmaameedsadeen.
Majiro Wax war ah oo kasoo baxay dhanka maamulka Puntland oo la xiriira dilalkan xalay ka dhacay magaalada balse ciidamada Maamulka Puntland ayaa xalay magaalada Boosaaso waxay ka sameeyeen howlgallo lagu baadi goobayo cidda dilalkaasi ka dambeysay lamana sheegin sidoo kale cid howlgalkaasi ay kusoo qab qabteen .
Tags: bosaso, Burundi, Muqdisho, SOMALIA
Somalia:South Africa to deliver 18 tons of supplies to Somalia + More Related News CHINA:Warning that new tick disease is highly infectious